Maxkamadda G/Banaadir oo go’aan ka gaartay kiiskii C/raxmaan C/shakuur | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Maxkamadda G/Banaadir oo go’aan ka gaartay kiiskii C/raxmaan C/shakuur
Maxkamadda G/Banaadir oo go’aan ka gaartay kiiskii C/raxmaan C/shakuur
Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa duhurnimadii maanta ku dhawaaqday in wax dambi ah lagu waayay siyaasiga C/raxmaan C/shakuur Warsame, kadib markii saakay Maxkamaddu ay u fariisatay kiiskii loo heystay.
Xarunta Makxamadda waxa goobjoog ka ahaa Guddoomiye ku xigeenka 1-aad Aqalka Sare Abshir Bukhaari, Xildhibaan Mahad Salaad, Xeer Ilaaliye ku xigeenka Qaranka Maxamed Xasan, dadweyne iyo bahda saxaafadda.
Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Banaadir Aweys Sheekh C/laahi oo ku dhawaaqay xukunka Maxkamadda ayaa sheegay in wax dambi ah uusan laheyn C/raxmaan C/shakuur, markii horena aanan lagu soo xirin waaran Maxkamadeed.
Xeer Ilaaliye ku xigeenka Maxamed Xasan ayaa dalbaday in kiiskan ay ka qaataan Racfaan, balse go’aankaas Maxkamadda ayaa ka diiday, waxaana ay sheegtay dacwadan in ay soo xirantay oo noqosho dambe aysan laheyn.
C/raxmaan C/Shakuur Warsame ayaa 18-kii Bishan waxaa gacanta ku dhigay ciidamada Nabad Suggida Soomaaliya, kadib markii ay weerar ku qaadeen hoygiisa Magaalada Muqdisho.